Qiblada Qabbaaniyaasha! – Bashiir M. Xersi
Date: 27 Jul 2012Author: Bashiir M. Xersi 5 Comments
Maahmaah Soomaaliyeed ayaa tiraah: “Biyo ururo meel godan ayay isugu tagaan” mid kalene waxay leedahay: “Geel tegay tubihi ceel” mid kalena waxay ahayd: “Biddoow anigu ku sheegi maayee, yaan camalkaagu ku sheegin”.
Burburinta dawladdii dhexe, duullaanka waxaa laga soo qaaday, oo mucaarad walbaa dabada la gashay xerada Daafi qurunleeyda, haddii dalkii burbur galay, jabhadihiina dagaallo dhexdooda ah ku hoobteen, waxaa xilligaa lagu qabtay shir sanaddii 1993-dii oo ka dhacay Addis Ababa. Sanado ka dibse iyadoo udbaheeda wadata ayey wadanka soo gashay, yaa u sabab ah? Dad badan yaa aaminsan qabqablayaal reer Gedo ahaa, maya, sidaa ma ahan Alshabaabta hadda joogta oo shaar kale wadatay ayaa sabab u ahayd, ka dib markii ay dadkii deegaanka dhibtay.
Shirkan Addis ka furan wuxuu ku yimid, waraaq si lama filaan ah mudane Faroole ugu diray kuwan lagu sheego inay daneeyaan arrimaha Soomaaliya, kuna sheegay inuu dastuurka qaadacay, ayna tahay shir la isugu yimaado Kenya ama Ethiopia, xasuuso, xeerku wuxuu ahaa qofkii diida dastuurka inuu nabaddiidyahay! Gaas ayaa ugu hormaray, kuna tilmaamay diidmada Faroole mid u gaar ah, oo dadka kale ee diiddan Dastuurka inay u gaar noqoto, maxaa reebaya? Faroole waa u gaar, inta kalana waa ka gaar, ani ma garan, ee qofkii gartay ha noo garaadiyo.
Shisheeye u baaqa Faroole kali kuma ahan, ee waa meeshuu Cigaal Shidaad ka yiri: “Waa la buuxaa, waa la badan yahay” waaba iga weydiine, saw lama lahayn; Garoowe ayaa xarun shirar isu badashay, maxaa keenay inuu Faroole soo hadal qaadi waayo? Ma halmaamin baan filaaye, mise maadaama uu cabashadaba u gudbiyey shisheeyaha, waa in shisheeyuhuna gogosha dhigaa, kaliya ma ahane, waa inayba go’aamiyaan waxa ka soo bixi doona, si aan u dhicin in cabashadii meel cidla ah ku dhacday.
Madasha waxaa ku sugan Shariif oo carriga Maraykanka ka imaanaya, markii horana ka sii duulay Uganda, Tahliil ayuu horay u sii qadanayey malaha. Faroole oo codsadaha shirkan ah, isna wuxuu ka imaaday dal shisheeye, Caalin isaguna iyo Gaas oo Muqdisha ka soo duulay, Shariif Sakiin wuxuu ka soo duulayBaydhaba Jannaay, oo ayaamahaanba sidii Shimbir Malabkii ugu dul wareegay sanayey, malaha wuxuu is leeyahay marka aad ku qaddo guddoonka baarlamaanka yaan lagugu qabsan? Xerta Ahlusunna, sidii qaruxu Dhuusamareeb uga dhacay, warkoodba lama hayn.
Sida aysan dunida uga jirin dhacdada caynkaa ah, ayey Soomaaliya caadi ka tahay, kuwa u sii cararaya iyo kuwa codsaday waxaaba ka sii liita, kuwan Odoy dhaqameedka lagu sheegayo, dushooda iyo diirkooda lagu dul gorgortamayo, Alla damiir dhintay ee dux beelay illeen dadnimo lagama sugo! Markii ay dhihi lahaayeen, anaga maxaad noogu wacateen haddii aysan taladu naga go’in? Ayaa qaarna dib u carooday, qaarkii harana HOOS GUNTIYO ku maqsuudeen, hoos iyo hareerba ma hillaaban, heegada sarana warkeedba daa.
Waxaa ka sii liita wadaaddo wax ay bulshada ugu qaybsan yihiin aan la garayn, mid inta Puntland ku soo ansixiyey Dastuur beeleed, maalintuu Garoowe ka soo duulay ee Xamar yimid diiday dastuurka Soomaaliweyn lagu badbaadinayo, aqriste ma is qabanaysaa? waxaa la mid ah Sheekh Ummal oo yiri; “inta dastuurka rabta dantooda ayey ka arkeen, inta diidanna dantooda ayey ka waayeen” waaba iga su’aale wadaadkani miyuusan ka waantoobin inuu Soomaali mar walba meel uga dhoco? War qofkii yiri;qodabka Jinsiyadda, Xuduudaha wadanka, Federalka, Caasimadda, iyo inuuba ku meel gaar yahayawgiis ayaan ku diidayaa, ma dantiiisa gaarka ah ayuu ka waayey? Waxaa kaloo la mid ah Shiikh Dhicisaw, oo aan la garanayn waxa uu u doodayo iyo waxa uu ka doodayo, waxa uu diidayo iyo waxa uu doonayo.
Dhaqan iyo dhur midna lama dhawrin, qaanuun iyo qodob midna lama qaabin, xeer iyo xukun midna lama xigan, maan iyo maskax midna lama maarayn, xil iyo xushamad midna lama xusin, xaq iyo xero midna lama xeerin. Waxaa la yaab ah meesha wax ku dhammaadeen, halka la taagan yahay iyo sida xaalku ku dambayn doono.
Previous Previous post: Guddoonka Gunnimada!
Next Next post: Marxaladda kala guurka ah iyo Madaxda mustaqbalka Q:3AAD
5 thoughts on “Qiblada Qabbaaniyaasha!”
Pingback: Qiblada Qabbaaniyaasha! | banooni
6 Nov 2014 at 4:29 pm
Reblogged this on HOGAAN DAACAD AH.
Pingback: Xaajimaxaad.blog.com Qiblada Qabbaaniyaasha! | banooni